ရင်ထဲမှာသိမ်းမထားတတ်လို့ တခုခုဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမိတော့တယ် – Hlataw.com
ကျွန်တော်အလုပ်သင်ဆင်းရမယ်လဲဆိုရောလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တာနဲ့ဘာနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့တာပေါ့။အမှန်တကယ်ကျောင်းပြီးလို့ရှေ့နေချိန်ဘာဆင်းရမယ်ဆို တော့ရင်တော့ခုန်မိတယ်။အမှန်တကယ်လဲရှေ့နေအလုပ်ကိုဝါသနာပါတာကတစ်ကြောင်း၊အလုပ်သင်ဆင်းရမှာကလဲ ကျွန်တော်အဒေါ်ရဲ့သူငယ်ချင်းရှေ့နေမ အပျိုကြီးဆီမှာဆိုတော့က တော်တော်လေးတော့ရင်ခုန်မိပါတယ်လေ။အဲ့ဒီရှေ့နေအပျိုကြီးဆိုတာအိမ်ကိုလာလည်နေကျပေါ့။ နာမည်ကတော့ဒေါ်ကေသီတဲ့။အသက်ကတော့၃၅ကျော်ပြီလေ။သူနဲ့အတူတူတွဲပြီးအလုပ်သင်ဆင်းရမှာပေါ့။သူ့ဆရာကကျွန်တော့်ကိုထောက်ခံချက်ပေးတယ်လေ။ ဒေါ်ကေသီနဲု့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ကခင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအမြဲဝင်ထွက်နေတဲ့သူပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကလေးဘ၀ကတည်းကဆိုပါတော့ဗျာ။ဒေါ်ကေသီဟာအပျိုကြီးမမတစ်ယောက်ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတောစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။
အင်မတန်မှချောမောလှပပြီးတော့ကျက်သရေရှိတဲ့အလှပိုင်ရှင်မျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူအလွာနဲ့သူတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။အသားလေးကလဲညိုစိမ့်စိမ့်နဲ့။ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလဲတောင့်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင်လို့ဆိုလို့လဲရပါတယ်။ထူးခြားတဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဆိုတာကတော့ သူ့အကြည့်တွေဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုတစ်ခါတစ်လေများ အော်..ရဲထက်တစ်ယောက်..ဒီအရွယ်တောင်ရောက်နေပြီ .. ဒီကလေးကငါတို့လက်ပေါ်မှာကြီးလာတာ စတဲ့ စကားတွေကပြောတိုင်းသူ့မျက်လုံးမှာအမျိုးအမည်အသိတဲ့ဘာသာစကားတွေပါဝင်ရောယှက်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အလိုလိုသိနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်မနက်စောစောထပြီးတော့မကေသီနဲ့ချိန်းထားတဲ့ဘာလမ်းကမစ္စတာဘရောင်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကမကေသီ..မကေသီလို့ခေါ်လို့နှုတ်ကျိုးနေတာပါ။အမှန်ကတော့အဒေါ်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်လို့အန်တီလို့ခေါ်ရမှာပေါ့လေ။
ဒါပေမဲ့အပျိုကြီးဆိုတော့လဲမကေသီလို့ခေါ့်တာကြိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ထားပါလေ.အခေါ်အေ၀ါ်တွေကအရေးမှမကြီးတာ။မစ္စတာဘရောင်းကိုရောက်တေ့ာနဲနဲစောနေတာနဲ့ကျွန်တော်ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာသောက်ပြီးတော့မကေသီအလာကိုထိုင် စောင့်နခဲ့ပါတယ်။့ြ့မိဲု့တော်ခမ်မနဲ့နီးတာကြောင့် မြိဲု့တော်ခမ်းမမှာအလုပ်တက်ဖို့လာကြတဲ့ဝန်ထမ်းမမတွေရဲ့ ခရမ်းရောင်ထမိန်အောက်မှာထင်းနေတဲ့အိုးကြိး၊အိုးလတ်။ အိုးကောက်တွေကို(ညစကားနဲ့ပြောရရင် နောက်ပိုင်းအလှများ)ခံစားရင်းကော်ဖီသောက်ကာမျက်စိအစာကျွေးနေမိပါတော့တယ်။ ဟေး..ရဲထက်…ရောက်နေတာကြာပြီလားကွ… အသံလာရာဘက်ဆီကိုကြည့်လိုက်တော့မကေသီပါ။ ဟုတ်..အစ်မ..မကြာသေးပါဘူး..လာထိုင်လေ…ဘာသောက်မလဲ ကော်ဖီပဲသောက်မယ်… ကျွန်တော်..မကေသီအတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မကေသီက ကျွန်တော့်ကိုအမှုတွဲတွေနဲ့ဒီကနေ့သွားရမဲ့ အမှုကိစ္စတွေကို ရှင်းပြပါ တယ်။
မကေသီဟာရုံးတက်တဲ့နေမို့လို့လာမသိဘူး၊ရင်ဖုံးအကျီ င်္လေးနဲ့ထမိန် ပန်းရောင်လေးကိုဝတ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရင်ဖုံးအကျီ င်္အဖြူလေး အောက်ကနေပြီးစွံ့ ကားပြီးဖုဖောင်နေတဲ့သူရဲ့ရွေရင်အစုံကိုခိုးကြည့်ပြီးတဲ့သကာလမှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေမြန်ဆန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖုဖောင်းနေတဲ့ရွေရင်အစုံကို ဖုံးအုပ်ထားတာ ကတော့ ကျောပြည့်ဘရာ အမဲရောင်လေးပါ။သူ့ရဲ့ထမိန်ပန်းရောင်လေးအောက်မှာတော့ဘာလိုမျိုးအရောင်လေးနဲ့ ပိပိလေးကိုဖုံးအုပ်ထား လေလိမ့်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မှနိ်းဆကြည့်နေမိမပါတယ်။ ဟဲ့…ရဲထက်..ဘာတွေတွေးနေတာလဲ…ကော်ဖီသောက်ပြီးရင်သွားကြမယ်..ရုံးချိန်းကနောက်ကျနေပြီ..အော်..ဟုတ်..မကေသီကပဲကျသင့်ငွေရှင်းပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးဦးဆောင်ပြီသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမှုတွဲစာရွက်တွေကိုင်ပြီးတော့ နောက်ကနေပေါ့။ပန်းရောင်ထမိန်အပျော့ သားအောက်မျာလမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်းမှာ။
နိမ့်တုန်မြင့်တုန်ဖြစ်နေတဲ့ မကေသီရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကိုအသက်ရှုမှားစွာကြည့်ရင်း ဆေးမိနေတဲ့လူလိုမျိုးပဲ မကေသီ ရဲ့ ကားရှိရာကိုလျှောက်လာမိပါတော့တယ်။ကားရှေ့ရောက်တော့ ရဲထက်…ကားမောင်းပေးပါလား..မ..နဲနဲခေါင်းကိုက်နေလို့…. အော်..သူ့ကိုသူ..မဆိုပါလား..ဇာတ်လမ်းတော့စပြီထင်တယ်….ကျွန်တော်လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်ရင်း ဟုတ်…အစ်မ… သူပေးတဲ့ကားသော့ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဟွန်ဒါဖစ် အဖြူရောင်လေးရဲ့ ဒရိုင်ဘာထိုင်ခုံနေရာကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ မကေသီကချက်ချင်းမ၀င်သေးပဲ ကားခေါင်မိုးပေါ်ကို သူရဲ့စလင်းဘက်အိတ်ကိုတင်ပြီးတော့ထမိန်ပြင်ဝတ်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာကျွန်တော်လှစ်ကနဲမြင်လိုက်ရတာကတော့မကေသီဝတ်လာတဲ့ အန်ဒါဝဲ အနီ ရောင်လေးပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော်နဲ မကေသီတို့ သွားမဲ့ …..တရားရုံးကိုရောက်တော့ကားပေါ့်ကဆင်းပြီး ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဖိုင်တွဲတွေကိုကိုင်ပြီးတော့။
သူ့ရဲ့ပန်းရောင် အပျော့သားထမိန်လေးအောက်က တုန်နေတဲ့ နောက်ပိုင်းအလှတွေကိုကြည့်ရင်း မျက်စိအစာကျွေးကာလျောက်လာခဲ့ပါ့တယ်။တရားခွင်ထဲရောက်တော့ မကေသီနားမှာပဲ တိုက်ပုံအမဲလေးဝတ်ပြီးဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။တရားခွင်မှာတော့မကေသီရဲ့ချေပလျှောက်လဲချက်တွေဟာတော်တော်လေးတော့ အတုယူစရာပါ။ တရားခွင်မှာမကေသီကအမှုကိုလျှောက်လဲချေပနေ..ကျွန်တော်ကလဲ မှတ်တမ်းတင်တဲပုံစံမျိုးလိုက်ရေးနေတုန်းမှာ ကျွန်တော်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကစူးစုးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေတယာယ်လို့ခံစားရလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ..တရားရုံးကစာရေးမဖြစ်နေပါတယ်။ အသက်ကတော့ ၃၈..၄၀လောက်ရှိနေပါပြီ..ဆံပင်ကိုအနောက်မှာစုပြီးချည်ထားတဲ့အတွက်မောက်နေတဲံ့နှာဖူးနဲ့..အနီရောင်တောက်တောက်ဆိုး ထားတဲ့သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းထူထူကြိးတွေကိုကျွန်တော်ရုတ်တရက် သတိထားလိုက်မိပ့ါတယ်။ ထိုင်နေတဲအတွက်ကိုယ်တစ်ပိုင်းကိုသာမြင်ရလို့သူ့ရဲ့ဘော်ဒီ ဟာတော်တော်လေးမိုက်မယ်ဆိုတာကို။
အသက်ရှုလိုက်ရင် ပိန်ဖောင်းပိန်ဖောင်းဖြစ်သွားတဲသူ့ရင်သားကြီးတွေကသက်သေခံလျှက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်သတိထားမိတာကတော့ အဲ့ဒီစာရေးမရဲ့မျက်လုံးဟာအရောင်တစ်ခုတောက်နေသလိုနဲ့သူအသက်ရှူတာကလဲ..ပုံမှန်ထက်ပိုမြန်နေသလိုပါပဲဗျာ။ အမှုစစ်တာလဲပြီးတဲအချိန်မှာ နေ့လည်၂နာရီရှိနေပါပြီ။တရားခွင်မှာဝတ်တဲ့ရှေ့နေကုတ်လေးကိုမကေသီကချွတ်လိုက်ပြီးတော့ထမိန်လေးပြင်ဝတ်ပြီးတော့ တရားခွင်ထဲကနေထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်တော့ မကေသီရဲ့အနောက်ကနေပဲတမင်လိုက်လျှောက်ကာအတွင်းခံအနီလေးကိုစိတ်ကူုးယဉ်ပြီးတော့ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်သူမရဲ့တင်ပါးကြီးတွေကိုသာအသာငမ်းငမ်းကြည့်ရင်းတရားရုံးရှေ့က ထမင်းဆိုင်လေးဆီကိုသာထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထမင်းဆိုင်မှာရောက် တော့မကေသီက ထူးထူးခြားခြားပဲ ကျွန်တော်အနားကထိုင်ခုံမှာလာပြီးကပ်ထိုင်ပါတယ်။ မှာထားတဲ့ထမင်းဟင်းပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားစားသောက်နေတုန်းမှာပဲ။
ဟဲ့..ကေသီ..ဒါဘယ်သူလေးလဲဟ…နင်နော်..အချင်းချင်းတွေကိုသျှိုထားပြန်ပြီ.. အသံလာရာကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနက တရားခွင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့စာရေးမပါ..အားလားလား..မိုက်လိုက်တဲဘော်ဒီဗျာ..ဂစ်တာရှိတ်ဆိုတာတာဒါမျိုးများလား… ဟုတ်ပါဘူး..သူဇာရဲ့..ဒါ့ချိန်ဘာအသစ်လေ… အော်… အော်မနေနဲ ..ထမင်းစားမယ်…လာ.. အေး..ငါလဲဒကာရှာနေတာနဲ့…ဒကာမကြီးကေသီကျန်းမာပါစေဟာ… မသူဇာဆိုတဲ့အစ်မကြီးလဲကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံမှာဝင်ပြီါ်တော့ထိုင်ပါတယ်။ အင်း..မချောနှစ်ယောက်ကြားညပ်နေတဲ့သူမတို့ရဲ့ ကျွန်တော့် ဘ၀ ဟာ ဘာဖီလ်းကြီးမှန်းမသိပါ့ဘူးဗျာ…ပုဆိုးဝတ်ထားတာမို့လို့…အောက်ကညီအငယ်ကောင်ကအောက်ခံဘောင်ဘီဝတ်ထားတဲကြားက တော်တော်လေးအပေါ်ကိုထောင်ထက်နေပါတော့တယ်။မသူဇာဆိုတဲ့အစ်မကြီးက ထမင်းစားနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုမသိမသာနဲ့လာထိပါတယ်။
မသိမသာဆိုတာကမတော်တဆပုံစံမျိုးပါ။ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုသူ့အသားနဲထိထိခြင်းလန့်ပြီးရုတ်လိုက်ပေမဲ့..မသူဇာကတော့မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထမင်းဆက်စားနေပါတယ်။စက္ကန့်ဝက်လောက်ကြာတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးခြေထောက်ကိုလာထိပါတယ်။ဒိတစ်ိခါတော့ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုမရုတ် တော့ဘူးလေ.ဒီအတိုင်းလေးမှေးထားတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမဟာ သူမရဲ့ခြေဖ၀ါးနဲ့ ကျွန်တော်ခြေဖမိုးကိုပွတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲထမင်းတောင် ဆက်မစားနိုင်တော့ပါဘူး.။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခြေဖ၀ါးနဲ့တစ်ယောက်နဲု့တစ်ယောက်ကလိနေတာ မကေသီမသိရှာပါဘူး။ထမင်းကိုသာဆက်စားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲထမင်းစားတာရပ်လိုက်ပြီးတော့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်လာတာနဲ မကေသီကိုခွင့်တောင်းတော့အောင်မာ..ရဲထက်..ဆေးလိပ်တွေဘာတွေတောင်သောက်တက်နေတာလား…ကြာပြီ..မကေသီရဲ့..ဟုတ်သားပဲကေသီရယ်..သောက်ပါစေ..ဒီအရွယ်တောင်ရောက်နေပြီ..။
အမြီးမပေါက်ပဲနေပါ့မလား.ဆေးလိပ်သောက်တက်ရုံတင်တက်တာမဟုတ် ပါဘူးဟာ… ဒါမသူဇာကပြောတာပါ။ ကျွန်တော်လဲစော်ကိစ္စမှာ (၁၀)တန်းနှစ်မှာ ဂိုက်လာပြေ့ပးတဲ့ ဆေးကျောင်းကအစ်မကြီးကောင်းမှုနဲ့ ရော၊တက္ကသိုလ်တက်စဉ်မှာ ထားခဲ့တဲ့ရည်းစားတွေနဲ့ရော၊ကကလို့ခေါ့်တဲ့လုးံပြီးမှစားလို့ရတာတွေနဲ့ရောဆိုအတွေ့အကြုံကဆရာကြီးအဆင့်မဟုတ်ရင်တောင်မှ ခလေးအဆင့် မဟုတ် တော့ပါဘူး.။မကေသီကထမင်းစားပြီးတော့ ရဲထက်ရေ..ဒီနေ့အတွက်တော့ရုံးချိန်းပြီးသွားပြီ..နင့်ကိုငါပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်..ငါလဲအ်ိမ်ပြန်စောစောနားမယ်ဟယ်…နော်.. ဟုတ်..အစ်မ.. ကျွန်တော်လဲမကေသီပြောသမျှကို ဟုတ်ပဲလုပ်နေတာချည်းပါပဲ။ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့တစ်စုံတစ်ခုသော ခံစားမှုမျီုးဟာရလာမယ်လို့မသိစိတ်မှာထင်နေမိပါတယ်။ ထိုစဉ်မှာပဲ..မသူဇာက.. ကေသီ..နင်ပြန်မှာလား..နင့်အခန်းတောင်မရောက်တာကြာပြီ…လိုက်လည်အုန်းမှပဲ.. အေး..သူဇာ..လိုက်ခဲ့လေ..။
တစ်ယောက်ထဲနေတာဆိုတော့စားချင်တာရှိရင်တစ်ခါတည်းဝယ်လာခဲ့..ဒါနဲ့နင်ကအခုလိုက်မလို့လား.. အင်းလေ…လိုက်ခဲ့မယ်..ဆရာ့ကိုခွင့်တောင်းလိုက်အုန်းမယ်။ ဆရာဆိုတာကတော့ တရားသူကြီးပါ။ထို့နောက်မှာတော့မကေသီကပိုက်ဆံရှင်းမယ်ဆိုပြီးစားပွဲထိုးလေးကိုခေါ်ပြီးပိုက်ဆံရှင်းပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့မကေသီ နဲ့မသူဇာဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အချက်ပြပြီးတော့ တရားရုံးထဲဝင်အုန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားကြပ်ါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တစ်ယောက်ထဲဆိုင်မှာစောင့်ပေါ့။ခဏကြာတောနှစ်ယောက်သားပြန်ရောက်လာပါတယ်။မကေသီနဲ့မသူဇာကိုယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် အလုံးအရပ်က မသူဇာကပိုပြီးတော့ထွား ပါတယ် မကေသီကတော့လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးပါ။နောက်ပြီးတော့မသူဇာရဲ့ဖင်ကြီးတွော ကြီးပြီးတော့ဘေးဘက်ကိုကားပါတယ်။မကေသီကတော့ လုံးပြီးတော့အပေါ်ဘက် ကိုကောက်သယောင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုတွေးနေမိပါတယ်။
အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ နှစ်ယောက်စလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ရရင်တော့လား…ဟင်း..ဟင်း တစ်အောင့်လောက်ကြာတော့သူတို့၂ယောက်သားပြန်ထွက်လာကြပါတယ်။လက်ထဲမှာလဲဖိုင်တွဲတစ်ထပ်ကိုင်လာကြပါတယ်။အမှုတွဲတွေလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုင်ပေးမယ်ဆိုတော့မသူဇာက ရပါတယ်..မောင်လေးရယ်…လို့ဆိုပြီးတော့ကားပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထူး ခြားတာကတော့မကေသီက ကားနောက်ခန်းမှာထိုငိပြီးတော့မသူဇာကတော့ ကျွန်တော့်ဘေးမှထိုင်ပါတယ။် ကားအဲယားကွန်းအေးအေးလေး..သီချင်းလေးကလဲငြိမ့်ြ့ငိမ့်လေး၊နဲ့နောက်တော့ ကျွန်တော်ဘေးမှာလဲရှိုက်ဖိုကြီး ငယ်တွေနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့နတ်သမီး(၂)ပါး။ငမ်းချင်တိုင်းငမ်းပေမဲ့ မွေဖွားနှုံးမြင့်လာတဲ့ရန်ကုန်မြီု့ကကား တွေ ကြားမှာတော့ မတိုက်မိအောင်သတိထားပြီးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ မကေသီကိုကျွန်တော်ဘက်မှန်ကနေ ကြည့်တော့သူမဟာ ထိုင်ခုံမှာအောက်လျောလျောထိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမှေးကာလိုက်လာပါတယ်။
မသူဇာက တော့ကျွန်တေ်ာ့ဘေးမှာပါ။ဟဲ့ကေသီ..ငါတို့စားစရာပဲဝယ်မယ်နော်..ဟိုနေ့ကဟာရှိသေးတယ်မဟုတ်လား..အင်းရှိတယ်…နင်စားချင်တာပဲဝယ်တော့..ငါဒီနေ့တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး..ဟိုဟာလေ..သိတယ်မဟုတ် လား… ဒါဆိုငါတစ်ယောက်ထဲပေါ့… မဟုတ်ပါဘူး..သူဇာရယ်..နင့်ဘေးကကိုယ်တော်လေးရှိသေးတယ်လေ.. သူတို့ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သေသေချာချာမကြားရပါဘူး။တစ်ချက်ချက်မှကြားရတာဆိုတော့ ဘာမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး။ကားမှာဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းသံကြောင့်လဲပါမယ်ထင်ပါတယ်။ထိုစဉ်မှာပဲမသူဇာကစတိုး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့ရောက်တေ့ာကျွန်တော့်ကိုကားခနရပ်ခိုင်းပြီးတော့ ကားပေါ်ကဆင်းသွားပါတယ်.။ ရဲထက်…. မကေသီကအနောက်ကလှမ်းခေါ်တာပါ။ ဗျာ..အစ်မ… ရဲထက်အချိန်ရသေးတယ်မဟုတ်လား..အိမ်ကိုလိုက်လည်အုန်းလေ..မရောက်တာလဲကြာပြီမဟုတ်လား ဟုတ်..အစ်မ..အချိန်ရပါတယ်။
နောက်တေ့ာရဲထက်သောက်တက်တယ်မဟုတ်လား… ဗျာ..ဟုတ်..နဲနဲတော့သောက်ပါတယ်။ အင်း..ဒါဆိုလဲ..သူဇာကိုအဖော်လုပ်ပြီးလိုက်သောက်ပေးလိုက်ပါလား..မ..ကနေသိပ်မကောင်းလို့..နောက်ပြီးနင့်အ်ိမ်ကလူတွေသွားမပြောနဲနော်…ငါနဲ့သူဇာနဲကအဲ့လိုပဲခွက်ပုန်းကစ်နေကျလေ…အော်…ကျွန်တော်ထမင်းဆိုင်မှာတွေးတဲ့အတွေးမှန်သွားပါတယ်။တစ်စုံတစ်ခုသောထူုးခြားတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခံစားခွင့်ရ တော့မယ်ဆိုတာ လေဗျာ။ မသူဇာပြန်လာတော့ကျွန်တော်ကားကိုမကေသီအိမ်ကိုသာခပ်မြန်မြန်လေးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မကေသီတို့အိမ်က…..ကွန်ဒိုမှာပါ။ သူမကတစ်ယောက်ထဲနေတာပါ။သူ့မိဘတွေကအမေရိကားမှာ နိုင်ငံသားတောင်ဖြစ်နေပါ ပြီ။သူတစ်ယောက်ထဲဒီမှာနေနေတာလေ။တစ်ခါ့တစ်လေတော့လဲ သူမိဘတွေရှိရာကိုလိုက်သွားတက်ပေမဲ့လို့ သူရဲ့ရှေ့နေအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေတကြောင့်မို့လို့ မြန်မာပြည်မှာပဲတစ်ယောက်ထဲလွတ်လွက်လပ်လပ်နေ နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မကေသီတို့အိမ်ရောက်တော့ကားပါကင်မှာကားကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့(၃)ဦး ဓါတ်လှေခါးနဲ့ အိမ်ပေါ်ိကိုတက်လာပါတယ်။မကေသီကတော့……ကွန်ဒိုရဲ့ (၈)လွာမှာနေတာပါ။ မကေသီကအခန်းတံခါးကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့ အခန်းထဲရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပဲ မကေသီနဲ့မသူဇာက လွတ်လွတ် လပ်လပ်နေနော်..ရဲထက် ဆိုပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ အခန်းထဲကိုသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲ သူတို့(၂)ယောက်လုံးကပုကျိပုကျိနဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိတော့ပါဘူးဗျာ။ အဲကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းထဲကဆိုဖာကြိးမှာထိုင်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရှူးပေါက်ချင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ မကေသီတို့(၂)ယောက်ဝင်သွားတဲ့ အခန်းတံခါးနားသွားပြီးတံခါးကိုခေါက်လိုက်ပါ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ မသူဇာထွက်လာပါတယ်။ဆံပင်တွေကလဲဖို့ယိုးဖားယားနဲ့ပါ။ကျွန်တော်လဲအခန်းထဲကိုအသာလေးချောင်း ကြည့်လိုက်တော့မကေသီတစ်ယောက်စောင်ခြုံထဲကနေပြီး ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။
အော်..ရဲထက်..ဘာလုပ်ချင်လို့လဲဟင်.. မသူဇာကကျွန်တော့်ကိုမေးပါတယ်။ ဟုိ…ဟို..အိမ်သာဘယ်နားရှိသလဲလို… အော်…လာ..မ..လိုက်ပြမယ်…လာလာ.. ကျွန်တော်လဲမသူဇာနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယာ်..မသူဇာရဲ့ဘေးဘက်ကိုစွံ့ကားနေတဲ့ ဖင်လုံးကြီးတွေကို ကြည့်ရင်းအဲ့ဒီဖင်လုံးကြီးတွေကို သာကိုင်ပြီး..အနောက်ကနေဆောင့်လိုက်ရရင်ဘယ်လောက်များကောင်း လိုက်မလဲဆိုတာတွေးမိပါတယ်။ အိမ်သာကိုလိုက်ပြပြီးတော့ မသူဇာက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ဘာရှာနေသလဲတော့ မသိပါဘူုး။ရေခဲသေတ္တာဖွင့်လိုက်၊ကြောင်အိမ်ကိုဖွင့်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ ရှူးပေါက်ပြီး တော့ပြန်အထွက်မှာပဲ ..ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲထားတာမို့ ရေချိုးခန်းရဲ့တန်းမှာလှမ်းထားတဲ့ ဘရာဇီယာအပြာ လေးနဲ့ အတွင်းခံ ပန်းရောင်လေးကိုကြည့်နေတုန်းမှာပဲ… ဟိတ်..ရဲထက်..ဘာလုပ်နေတာလဲ..မပြီးသေးဘုူးလား ကျွန်တော်လဲမသူဇာအသံကြားတာနဲ့အိမ်သာထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
လျော့ရဲနေတဲ့ပုဆိုးကိုပြင်ဝတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဖွားဖက်တော်ဟာချစ်မမနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့အလှနဲ့နှီပ်စက်ထားတဲ့အတွက်ထိုးထောင်နေ တာကိုတွေ့တော့ မသူဇာကမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ ဟယ်..ရဲထက်..နင်..ေ၈ွလှိမ့်နေတာလား..အထဲမှာ… ဂွေလှိမ့်တယ်ဆိုတာဂွင်းတိုက်နေတာလားလို့မေးတာပါ.။ကျွန်တော်လဲရုတ်တရက်ကြီးမို့ရှက်သွားပြီး…. မဟုတ်ပါဘူး.အစ်မရယ်…လို့သာပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ နင့်ဟာကလဲမဟုတ်ပါဘူးသာဆိုတယ်ဟယ်..အော်..ဟိုတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေမြင်သွားလို့လားမသိလို့သူ.ဟာသူပြောပြီးတော့ရယ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လဲမကြာချင်ယောင်ဆောင်ပြီးဧည့်ခန်းထဲကိုသာထွက်ခဲ့ပါတယ်…ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့မသူဇာကလဲကပ်လိုက်လာပါတယ်။ဧည့်ခန်းထဲလဲရောက်ရောမသူဇာကနောက်နေပြီးတော့တစ်စုံတစ်ခုလှမ်းပေးလို့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့…ဒဘယ်ဘလက် တစ်လုံးပါ. သူမကိုယ်တိုင်လဲသူမလက်ထဲမှာဖန်ခွက်ရယ်။
ခုနက၀ယ်လာတဲ့အာလူးကြော်ထုတ်တွေရယ်ပါ။ သူမကျွန်တော်ကိုဘာနဲ့စပ်မလဲလို့မေးတော့ ကျွန်တော်ကရေခဲနဲ ပဲနိလို့ပြောတော့..မသူဇာက မ..ကတော့မရဘူး..ကိုလာနဲ့စပ်မယ်..စပ်ပေး..လို့ပြောပါတယ်။ သူ့ဖန်ခွက်ထဲကို သူ့စိတ်ကြိုက်စပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲဖန်ခွက်ိထဲကိုရေခဲတုန်းထည့် ၀ီစကီနဲနဲ ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူမနဲ့အတူရောက်တက်ရာရာတွေပြောရင်ဝီစကီကိုဇိမ်ဆွဲသောက်နေမိပါတယ်။ဒုတိယခွက်ကိုရောက်တော့သူမလဲနဲနဲအရှိန်ရလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မျှင်းပြီးတော့သောက်နေတာကြောင့် ရီဝေေ၀လေးပဲရှိနေပါတယ်။သူမက ဇာတ်ကနဲ ဆိုထလာပြီးတော့ကျွန်တော့်နားမှာလာထိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော် တို့(၂)ယောက်သားစကားလေးပြောလိုက်..အမြည်းလေးစားလိုက်နဲ့ လုပ်နေတုန်းမှာမကေသီကိုမေ့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်….။ ဟာ..မ…မကေသီရော…. သူ့အခန်းထဲမှာလေ..ဖလက်ပြနေတယ်… ဟင်..သူနေမကောင်းလို့လား… သိချင်သွားကြည့်လေ…။
အာ..အစ်မကလဲ..ဘယ်ကောင်းမှာလဲ.. ကဲ..သွားကြည့်လေ..သိချင်တယ်ဆို…ကြည့်ပြီးကောင်းလာလိမ့်မယ်…ဟီး သူမကပြောရင်းရယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲဝတ်ထားတဲ့ လည်ကတုံးအကျီ င်္ကစိတ်ကျဉ်းကျပ်စေတာမို့လို့ ချွတ်လိုက်ပြီး ချိတ်တစ်ခုယုပြီးချိတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မကေသီရဲ့ အခန်းထဲကိုတံခါးကိုတိုး တိုးလေးဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ပါတယ်။မီးမှိန်မှိန်လေးထွန်းထားလို့ သဲသဲကွဲကွဲ ဘာဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတာကြောင့်တစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်နင်းလိုက်မိပါတယ်။သေချာကြည့်လိုက်တော့မကေသီမနက်ကကျွန် တော့်ကိုလှစ်ပြသွားတဲ့ အန်ဒါဝဲအနီရောင်လေးပါ။မကေသီနားကိုတဖြေးဖြေးနဲ့ ကပ်သွားတော့သူ့ဆီကဟောက်သံလေးတောင်ကြားနေရပါတယ်။ အော်..မကေသီအိပ်နေတာပါလား…အနီးကပ်ကြည့်တော့မှ..မကေသီဟာအိပ်နေတာမှန်ပေမဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးနဲပါ။စောင်ခြုံထဲမှာဝတ်လစ်စလစ်အိပ်နေတာပါ။သူ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းကုန်းပြီးတော့။
နမ်းချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားထွက်လာလို့မျက်နှာလွဲလိုက်တော့ ကုတင်ဘေးကစားစားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး ဆိုဒ်သာရှိနေတဲ့ ပန်းရောင်အလုံးလေးကိုတွေ့ပါ့တယ်။ကျွန်တော်သိလိုက်တာကတော့ဒါဟာဗိုင်ဗရေတာလေး တစ်ခုပါပဲဗျာ။ရွတ်..ရွတ်…အသံလာရာကိုကြည့်လိုက်တော့မသူဇာကကျွန်တော်ကိုလက်ပြပြီးခေါ်နေတာပါ။.ကျွန်တော်လဲသိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲရဲထက်..သူနေကောင်းရဲ့လား… မသူဇာကပြုံးစစနဲု့မေးပါတယ်။။ကျွန်တော်ကခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပြီါ်တော့မသူဇာကိုကြည့်လိုက်တော့မသူဇာဝတ် ထားတဲရှပ်အကျီလိုအကျီ င်္က ရင်ဘတ်ကျယ်သီး(၂)လုံးဖြုတ်ထားပြီးသူ့မရဲ့စနေနှစ်ခိုင်ဟာ ထင်ခနဲဖြစ်နေပါ တယ်။ ဟဲ..ဘာတွေကြည်နေတာလဲ..ဒါလာ..ရဲထက်… မသူဇာဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးချင်းဖြုတ်ပြပါတယ်။ကျယ်သီးအားလုံးကုန်သွာတဲ့အချိန် မှာဘရာဇီယာပန်းရောင်လေးဟာဖွံ့ထွားကြီးမားတဲ့သူမရဲ့ရွေရင်အစုံကို။
မနိုင်ဝန်ထမ်းထားတာကိုတွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲစိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ..မသူဇာကိုအတင်းဖက်ပြီနမ်ပါတယ်။နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ပြီးနမ်းတာသူ့မရဲ့နှုတ် ခမ်းထူထူ ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပြန်စုပ်ပေးတာကြောင့်တမူထူးတဲ့ခံစားမှုကိုရပါတယ်။သူမက ကဲ..ကိုယ်တော်..လို့ပြောပြီး ..ဆိုဖာကိုမျက်စပစ်ပြပါတယ်။ တဆက်ထဲမှာပဲသူမဟာသူမ၀တ်ထားတဲရှပ်အကျီ င်္ကိုချွတ်လိုက်ပြီးမကေသီအခန်းထဲကိုပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုဖာပေါ်ရောက်တာနဲ့ပဲသူမရဲ့ဘရာကိုအတင်းလှန်ပြီးကျွန်တော်နို့တွေကိုဘယ်ညာစို့ပါတယ်။နောက်တော့သူမ ရဲ့ပိပိကို စကဒ်ထမိန်ပေါ်ကနေပွတ်တာအားမရတာကြောင့်မို့လို့ စကဒ်ထမိန်ကိုချွတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မသူဇာ လဲမတ်တပ်ရပ်ပြီးစကဒ်ထမိန်ကိုချွတ် လိုက်တဲ့အခါမှာ ပန်တီ အမဲရောင်လေးအောက်မှာဖောင်းကားနေတဲ့သူမ ရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လဲအချိန်ဆိုင်းမနေတော့ပဲ ပင်တီဂွကြားကိုလက်ထည့်ပြီးပွတ်၊တ ဆက်တည်းမှာပဲ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာကိုယ်လုံးကိုဖိကပ်ထားပါတော့တယ်။
တော်တော်လေးနမ်းပြီးတော့သူမရဲ့ ပင်တီမှာအရည်တွေတော်တော်လေးစိုနေလို့ချွတ်ချလိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်သူမရဲ့ပေါ်င်ကြားမှာနေရာယူကာ အဖုတ်ရဲ့အကွဲကြောင်းအလိုက်နမ်းပါတယ်။ညှီစို့စို့အနံ့လေးတွေလှိုင်လှိုင်ထွက်လာတဲအချိန်မှာတော့ကျွန် တော်ဟာသူ့မအစိလေးထောင်နေတာကိုလက်နဲ့ တော်တော်လေးထိုးချေထားပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ တော့ဆိုဖာပေါ်မှာလျောပြီးထိုင်နေတဲ့သူမကိုမတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး မာတောင်နေတဲ့ကျွန်တော်လီးကိုသူ့မျက်နှာနား မှာအပ်လိုက်တာနဲ့သူမဟာလက်နဲ့ဆွဲယူပြီးတော့တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်ပါတယ်။ခြေကိုကုပ်၊လက်နောက်ပစ်ပြီးတင်း ခံပေမဲ့ သူမရဲ့လီးစုပ်ပညာဟာ ပရိုအဆင့်ရှိတာကြောင်ဒူးတွေညွတ်ကျရတဲ့အထိပါပဲ။(၃)ခါလောက်ဒုးညွတ်ကျ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမကိုကျွန်တော် ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး တပြီုင်နက်ပဲ လီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့်လိုက်ပါ တယ်။ အား..အင့် ဖွတ်..ဆွတ်..အား..ကောင်းလိုက်တာ..အင်း..အင်း။
ပက်လက်အနေအထားနဲခံနေတဲ့မသူဇာဟာသူမရဲ့နို့တွေကိုသူမလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပဲစုပြီးကိုင်ထားပါတယ်။သူမလက်ညှိုးနဲ့နို့သီခေါင်းတွေကိုထိုးချေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လှေထိုးကြီးပုံစံနဲ့ပုံမှန်အားပါပါနဲစောင့်ပေးနေ မိပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ လီးနဲစောက်ဖုတ်နဲ့ရိုက်တဲ့အသံရော..မသူဇာရဲ့ညည်းသံနှစ်ခုက တိတ်ဆိတ် ခြင်းကိုဖောက်ခွဲလို့နေပါတော့တယ်ဗျာ။ အား..ကောင်းလား..မသူဇာ..အင်း..ရဲထက်ကောင်းတယ်…အား… ပုံစံပြောင်းမယ်.. အင်း.. မသူဇာကပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုသူမလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ဆိုဖာလက်တန်းကိုလက်ထောက်ပြီးဖင်ပူးတောင်းထောင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲသူမဖင်ပူးတောင်းထောင်ပြိးတာနဲ့တစိပြီုင်နက်လီးကိုတစ်ဆုံးထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။လီးဝင်သွားတာနဲသူမရဲ့ဖင်ကြီးတွေဟာရမ်းခါပြီးသူမလိုချင်တဲဖီလင်ကိုယူပါတယ်။ကျွန်တော်လဲတင်ပါးကြီိးတွေကိုကိုင်ညှစ်ပြိးအားနဲ့စောင့်ပေးနေပါတော့တယ်။
မောင်..မ…ပြီးချင်ပြီ..ဆံပင်ကိုဆွဲကွာ..ဖင်ကိုရိုက်… ဖြန်း..ဖြန်း..သူမရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်နာပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းတင်ပါးကိုရိုက်လိုက်..ဆံပင်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်..လီးကိုစောင့်ထိုးလိုက်လုပ်နေပါတယ်။.အားပါးတရဆံပင်ကိုဆွဲပြီးဆောင့်လိုက်တော့အချက်(၃၀)လောက်မှာပဲသူမပြီးသွားပါတယ်။ကျွန်တေ်ာလဲဆံပင်ဆွဲထားတဲ့လက်ကိုလျောပေ့းလိုက်တဲ့အခါမှာသူမဆံပင်တွေတောင်ကျွတ်ပြီးလက်မှာပါလာပါတယ်ကောင်းလိုက်တာကွာ…မ…ကအဲ့လိုကြမ်းမှကြိုက်တာ..မ..ပြီးတာ(၃)ခါရှိပြီ..မင်းတစ်ခါပြီးလိုက်တော့လေ.. ပြော.ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ.. ကျွန်တော်လဲပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီးတော့သူမပေါင်ကြားထဲဝင်ကာ အစေ့ကိုလက်နဲ့ထောက်လိုက်၊ပွတ်လိုက်နဲ့ သူမကိုလိုးနေမိပါတယ်။ အားး.ကောင်းတယ်..။နို့ဆွဲကာ..နို့သီးခေါင်းကိုဆွဲ..နာနာလေးဆွဲ..ပြန်ကောင်းလာပြီ..အင့်..အား…ထိတယ်..အား..ကောင်းလိုက်တာကွာ…သူမရဲ့ညွန်ကြားနေတဲ့အတိုင်းလိုးနေရင်းကျွန်တော်ပြီးချင်လာတာနဲ့.. ။
မ..ဘယ်မှာပြီးရမလဲ.. အင်..ရဲထက်..အထဲမှမပြီးနဲ့ အပြင်မှာကြိုက်တဲ့နေရာပြီးလိုက်.. ဟုတ်… ကျွန်တော်လဲနို့ကိုဆွဲပြီးလီးကိုအားနဲ အချက်၂၀ ကျော်ဆောင့်လိုက်တြာ့ပီးချင်တာလာနဲ့ အဖုတ်ကနေစွပ်ကနဲ ဆွဲနှုတ်ပြီတော့ပက်လက်လှန်နေတဲ့သူမကိုခွလိုက်ပြီးနို့ပေါ်ကိုအရည်တွေပန်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။နို့ပေါ်ကို ပန်းနေတဲအရည်တွေက အရှိန်လွန်ပြီးသူမရဲ့နှုတ်ခမ်းအထိရောက်သွားတာကိုလျှာနဲ့သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မသူဇာ ကနောက်တော့ ကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲကို ၀င်ပြီးအနားယူနေပါတယ်။အတော်လေးကြာမှာရေဆေးသန့်စင်ဖို့ အိမ်သာဘက်ကိုနှစ်ဦးသားထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဟင်…မကေသီ…ဘယ်တုန်းကနိုးနေတာလဲ.. မကေသီကဘရာဇီယာလေးနဲ့သူအခန်းပေါက်ဝမှာ ခုံတစ်လုံးနဲထိုင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့တော့လန့်သွား တာပါ။နောက်တော့သူမဟာဘော်လီ ကျောပြည့်အမည်းလေးနဲ့ အောက်ကတော့မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ်အဖြူ ကြီး ကိုပတ်ထားပါတယ်။
ကေသီ..နီုးပြီးလာ..ဘယ်လိုလဲ..ပစ္စည်းအသစ်ရွဲု့အစွမ်း.. ဟွန်း..အစစ်လောက်တော့ဘယ်ကောင်းမလဲသူဇာရဲ့..ညည်းတအားထန်နေတာငါတွေသားပဲ… မသူဇာက…နင်ကအင်တင်တင်လုပ်နေတာကို…ငါကရဲထက်ကိုမြင်ကတည်းကကြွေကျသွားတာ….အေးလေ..ငါတို့လဲအစစ်နဲ့ဝေးနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ..ကေသီ..ဆရာတပည့်ဆက်ဆံရေးတွေ မေ့လိုက်ဒီည ကစပြီး ငါတို့ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ဟာ..နော်.. ဟွန်း..ဒီကလေးကငါ့လက်ပေါ်ကြီးလာတာဟ.. ညည်းလက်ပေါ်ကြီးလာတဲ့ကလေးဘယ်လောက်စွမ်းသလဲညည်းသိရင်သိပ်ကျေနပ်သွားမှာ..လာရဲထက်..မရေဆေးပေးမယ်. သူတို့ဘာတွေလဲ..ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကျွန်တော်လဲဆေးမိထားသူလို မသူဇာခေါ်ရာလိုက်သွားမိပါတော့တယ် ကျွန်တော်လဲရေချိုးခန်းထဲကိုမသူဇာနဲ့အတူပဲလိုက်ဝင်လိုက်ပါတယ်။မသူဇာဆီမှာရော ကျွန်တော်ဆီမှာအ၀တ် အစားဆိုဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လဲ တစ်ချီချပြီးလိုက်လို့တဏှာစိတ်တွေငြိမ်သွားလို့လားတော့မသိဘူး။
မိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေတာကို ရှက်သလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်။မသူဇာက ရေချိုးခန်းထဲမှာကျွန်တော်လီးကိုသေချာစွာပဲဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါဆေးကြောပေးပါတယ်။နောက်တော့သူမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုလဲသူမဆေးကြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ဆေးမိထားတဲ့လူလိုပဲလှုပ်ရှားမှု၊တွေးခေါ်မှုအစစ အရာရာအားလုံးဟာနှေးကွေးလေးလံနေပြီးသူမတို့(၂)ယောက်ရဲ့ စေခိုင်းမှုတွေ၊ပြောစကားတွေမှာနစ်မျောနေ ပါတယ်။ဒါကိုသတိထားမိပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကျတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်ပါဘူး။။စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဖြစ် နေတယ်လို့ခေါ်မလားတော့မသိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့(၂)ဦးသားခုနကအပြိုင်အဆိုင်ကြဲထားတဲ့ပစ္စည်းကိုယ်စီကိုဆေးကြောပြီးတဲ့အခါမှာတေ့ာရေချိုးခန်းထဲကထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။အပြင်မှာမကေသီရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့အသိကြောင့်လားတော့မသိပါဘူး ကျွန်တော်အပြင်ကိုပြန်ထွက်ဖို့နည်းနည်းရှက်နေမိပါတယ်။
မသူဇာကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပုံစံနဲ့အပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လဲရှက်ရှက်နဲ့ပဲ(မရိုသေ့စကား)လီးတန်း လန်းနဲ့ တစ်လုံးချင်းတုံတုံ တုံတုံနဲ့လျှောက်သွားတဲ့မသူဇာအနောက်ကို လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။မကေသီကကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူမက ဧည့်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်နေပါတော့တယ်။ သူဇာရေ..ရဲထက်ကိုဟိုဘက်ခန်းမှာရှိတဲ့ဘီဒိုထဲက အ၀တ်အစားတွေပေးဝတ်လိုက်လေ…သူပုဆိုးနဲ့ရှပ်နဲ့ ဆို အနေကျဉ်းကျပ်နေအုန်းမယ်…. အေး..သိတယ်..ကေသီရေ.. စကားလဲဆုံးရောမသူဇာကမကေသီအခန်းရဲ့ဘေးအခန်းကိုတံခါးလောခ့်ဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ပြီးအခန်းထောင့်က ကျွန်းသားအညိုရောင်ဘီဒိုကြီးထဲက မျက်နှာသုတ်ပ၀ါအဖြူနှစ်ခုကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်လဲလှမ်းယူ လိုက်ပြီးတော့ခါးမှာပတ်ထားပါတယ်။သူလဲကျွန်တော့်လိုပဲမျက်နှာသုတ်ပ၀ါအဖြူကြီးကိုယူပြီးတော့ ခါးမှာပတ် လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဘီဒိုဒုတိယအဆင့်ကနေပြီးတော့ ဘတ်စ်စကတ်ဘောဘောင်းဘီတစ်ထည်ရယ်၊ တီရှပ်တစ်ထည်ရယ်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘီဒိုကြီးရဲ့အံဆွဲထဲကနေပြီးတော့။
အမျိုးသား သုံး ရေမွှေး ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်လဲသူထုတ်ပေးတဲ့အကျီ င်္ကိုဝတ်ပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ခန်းကဆိုဖာဘက်ကို ထွက်လာခဲပါတယ်။မသူဇာကတော့မကေသီအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ အကျီ င်္သွားလဲဟန်တူပါတယ်။ ရဲထက်..လာ..ဒီမှာကော်ဖီဖျော်ထားတယ်။ပေါင်မုန့်လဲထောပတ်သုတ်ထားတယ်..စားလိုက်အုန်းမကေသီကကျွန်တော်ကိုကော်ဖီခွက်လှမ်းပေးပါတယ်။ကော်ဖီကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်လဲ သူမဘေးနားမှာကပ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူမကတော့ အိမ်နေရင်ဂါဝန်ပန်းရောင်လေးကိုဝတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲမကေသီပေးတဲ့ကော်ဖီကိုသောက်ရင်း တစ်စုံတစ်ရာကိုတွေးတောနေခဲ့မိပါတယ်။ ဒါကိုသတိ ထားမိတဲ့မကေသီက… ရဲထက်..ဘာတွေတွေးနေတာလဲကွ..မင်းတွေးနေတာတွေ မ သိတယ်သိလား အင်း..သိရင်ပြောပြလေ… သူဇာနဲ့ မ နဲ့ ကငယ်ငယ်ကတည်းကသူငယ်ချင်းတွေလေ…သူဇာတို့ကချို့တဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ မာမီတို့ကခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းထားပေးတာ..။
ငယ်ကတည်းကတူတူနေလာကြတာပေါ့။တစ်ခန်းထဲအတူနေ အတူသွား၊အတူစားဆိုတော့သူငယ်ချင်းတွေလိုသာမကပဲ ညီအစ်မတွေလိုဖြစ်လာတာပေါ့။အဲ..အစ်မတို့ အပျို ဘော်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ မ နဲ့ သူဇာနဲ့ အတက်တစ်ခုဆန်းမိပြန်တယ်လေ..အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ အပြာ စာအုပ်တွေသူဇာက သူ့အိမ်ပြန်ရင်းယူယူလာတက်တယ်။ရတနာဝင်းထိန်တို့ မောင်မောင်တုတ်တို့ဘာတို့ပေါ့။ အဲ့ဒါတွေကို(၂)ယောက်သားအခန်းထဲမှာ ညလူခြေတိတ်ပြီဆိုခိုးပြီးဖတ်ရင် ရမ္မက်တွေတက်ခဲ့တာပေါ့။ကြာလာ တော့သူဇာနဲ့ မနဲ့ ကလက်စ်ဘီစီယန် ဖြစ်လာကြတယ်။သူဟာကိုယ်ပွတ်၊ကိုယ့်ဟာသူပွတ်ပေါ့ ..တစ်ရက်အဲ့ဒီ လိုအပြာစာအုပ်တွေဖတ်နေရင်းနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖီလ်းတွေတက်ပြီးပွတ်နေတုန်းမှာ ဒယ်ဒီအသိ နိုင်ငံခြားက စမစ်ဆိုတဲ့ အဖြူကောင်ကြီး အိမ်ရောက်နေတာနဲ့ ကြုံရော။စမစ်ကလူချောပါ။ မနဲ့သူဇာလဲစမစ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးရင်ခုန်ခဲ့တာလေ။
အဲ့တုန်းကဆိုအစ်မတို့အသက်က(၁၈)ပဲရှိသေးတာ၊အဲ့ဒီလိုနှစ်ယောက်သား အပြာစာအုပ်ကိုယ်စီဖတ်ပြီးဇိမ်ယူနေတုန်းမှာ ဗြုန်းဆိုစမစ်က မ တို့အခန်းကိုဝင်လာတယ်လေ။ပြီးတော့ ပြီးတော့…. ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်တာလဲ..မကေသီ… ပြီးတော့ငါတို့ကိုတက်ခွသွာတာပေါ့ရဲထက်ရယ်…. မသူဇာကအခန်းထဲကထွက်လာပြီးတော့ ခုနကကျွန်တော်နဲ့လိုးတုန်းကချွတ်ထားတဲ့ သူ့ပင်တီအမဲလေးကို ကောက်စွပ်လိုက်ရင်းဝင်ပြောပါတယ်။ပြီးတော့သူလဲကျွန်တော့်နားမှာကပ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။မချောနှစ်ယောက် နဲ့ဘေးတိုက်ထိုင်နေရတာဆိုတော့အောက်ကကောင်က ပြန်ထချင်သလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြသေးလဲ..ဟင်… ကျွန်တော်ကသိချင်စိတ်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။မသူဇာကပဲဆက်ပြီးတော့ အဲ့နောက်မှာတော့ မ တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာကာမအရသာကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားတက်သွားတာပေါ့၊စမစ် ကလဲလစ်ရင်လစ်သလို မ တို့(၂)ယောက်လုံးကိုလိုးတယ်လေ။
သူက မ တို့(၂)ယောက်လုံးအတွက်ကာမဘုရင် ကြီးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။သူမြန်မာပြည်မှာ ရုံးခွဲလာဖွင့်သွားတဲ့(၄)နှစ်အတွင်းမှာ မ တို့(၂)ယောက်စလုံး နဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိကိုဆက်ဆံကြတာလေ။ပုံစံမျိုးစုံ ၊လိုးနည်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့၊သူကဆန်းတယ်..ကွ။ တကယ့်ကိုအဖွဲ့လိုက် ဆက်စ် သမား၊အနည်းဆုံး(၂)ယောက်တစ်ယောက်မှ၊သူနဲ့နေတာနောက်ဆုံးအကြိမ်တုန်းကဆိုရင် သူပြည်တော်ပြန်မှာမို့လို့လာခေါ်တဲ့သူဇနီးရယ်၊မတို့(၂)ယောက်ရယ်၊နောက်သူ့အတွင်းရေးမှူးမ လေးရယ်အတူတူလုပ်ကြတာ။ ပြောရရင်တော့ မတို့လဲ အဖွဲ့လိုက် လုပ်ရတဲ့ဖီလ်းကိုကြိုက်သွားတယ်။စမစ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မ တို့ ရည်းစားတွေဘာတွေထားဖြစ်ကြတယ်။အတူတူလဲလုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ စမစ်သင်ပေးသွားတဲ့ပညာတွေက အဆင့်မြင့်တာမို့လို့ မ တို့(၂)ယောက်စိတ်ကျေနပ်မှုမရပြန်ဘူး။ဒါကြောင့် ဒီနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ မတို့ နှစ်ခြိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့ ပုံစံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ မ တို့(၂)ယောက်လုံးယောင်္ကျားမယူပဲနေကြ တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ မ တို့က ပစ္စည်းထဲကိုလီးဝင်နေပါစေ။တစ်ယောက်နို့တွေတစ်ယောက်စို့တာမျိုး တို့၊တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်စ်ဘီစယန်ပုံစံမျီုးမှမလုပ်ရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းစိတ်ကျေနပ်မှု မရနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်စ်ဘီယန် လုပ်ပြီးမှစိတ်ကျေနပ်တယ်ပေါ့။ဒါလဲ ဆိုက်ကိုပဲနဲ့တူပါတယ်။တကယ်တော့ မ တို့ဟာမသိစိတ်စွဲလန်းမှုကြောင့် ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာပါ။ အော်..မတို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သိလား။ဒီတော့စမစ်ပြန်သွားပြီးကတည်းကလစ်ဘီယန်ပဲလုပ်နေတာ လား… မဟုတ်ဘူးရဲထက်…မ တို့ ဆီမှာ ဆက်စ် ပါတနာတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်က ရဲလင်းတဲ့။သူကသင်္ဘောအရာ ရှိတစ်ယောက်လေ။မိန်းမလဲရှိတယ်။တကယ်တော့သူဇာရဲ့အဆက်ဟောင်းပေါ့။သူမိန်းမကလဲ ကြိုက်တဲ့အမျီုးသမီးလေ။ဆိုတော့သိပ်မစည်းရုံးရဘူးပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ မ တို့(၂)ယောက်နဲ့ ရဲလင်းတို့လင်မယား တစ်လကို (၂)ခါ (၃)ခါလောက်လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာရဲလင်းတို့လင်မယားကစင်္ကာပူကိုအပြီးပြောင်းသွား ကြတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ မနဲ့သူဇာတို့(၂)ယောက်ပဲ လက်စ်ဘီယန်အဖြစ်တူတူနေဖြစ်ကြတယ်လေ။ ရဲထက်ရေ..ရှေ့မှာပြောပြီးပါပကော..ငါတို့ကဒုတ်ဝင်တာထက်စာရင်(၂)ယောက်သားအထိအတွေ့ကိုပိုမက်တာဟ..ကဲ..ကော်ဖီသောက်လိုက်အုန်း.. ဟုတ်..ဒါနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ရောဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ… ဟားဟာ…ဒီကိစ္စကိုအမှန်အတိုင်းပြောရင်ရဲထက်ရေ..နင့်အကြောင်းတွေဗူးပေါ်သလိုပေါ်မှာနော်… ဟုတ်..ပြောပါ..နားထောင်ချင်လို့ပါ။ အေး..နင်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအိမ်ခေါ်ပြီးစော်ဖြုတ်ဖူးတယ်မဟုတ်လား..သေချာပြန်စဉ်းစား ကြည့်စမ်း… မကေသီပြောမှ ကျွန်တော်တဖြေးဖြေးပြန်စဉ်းစားပါတယ်။ အာ…ဟုတ်တယ်…ဟုတ်တယ်..ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက စော်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်နေတာ။
အဲ့ဒါမေမေတပည့် လေ။မေမေရုံးက မေမေ ကိုယ်ရေးအရာရှိပဲဆိုပါတော့။သူနဲ့ဖြစ်ဖူးတယ်..မေမေတို့ခရီးသွားနေတုန်း. နင်လေ..အဲ့တုန်းကနင့်အခန်းထဲမှာအောကားကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးစော်ကို ကုတင်စောင်းမှာကုန်းခိုင်းပြီး အနောက်ကနေချနေတာလေ…နောက်တော့ နင်စိတ်တွေမထိန်းနီုင်တာလားဘာလားမသိဘူး..သူ့ဘရာဇီယာ ကိုလက်ပြန်သျှိုဝတ်ခိုင်းပြီးတော့မြင်းဇက်ကြိုးဆွဲသလိုကိုဆွဲတာမှတ်မိလား..နောက်တော့ငါသတိထားမိတာအဲ့စော်ရဲ့ပါးစပ်မှာနင့်ရဲ့အတွင်းခံကိုဆို့ထားသေးတယ်လေ..စော်က၀ူးဝူးဝါးဝါးနဲ့အော်နေတာလေ…ငါအားလုံးမြင် ခဲ့တယ်။နောက်တော့ ငါသူဇာကိုပြောပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နင့်အဒေါ်ကလဲ နင်ကျောင်းပြီးရင် ငါဆီပို့ပြီးအလုပ်သင် ဆင်းခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတော့ ငါတို့လဲမလှုပ်ရှားပဲစောင့်နေလိုက်တာလေ…ငါတို့ကတွေ့ရာလူနဲ့ ဖြစ်လို့မရဘူးဟ…တစ်ယောက်ချင်းဖြစ်ကြမယ်ဆိုလဲအာသာမပြေကြ၊နှစ်ယောက်ပူးဆိုတော့လဲ သိက္ခာတွေဘာ တွေငဲ့ရသေးတယ်လေ။
နောက်တော့အခုခေတ်ကလိုအင်တာနက်ပေါ်ရောက်သွားခဲ့ရင်ကွဲပြီ..မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်။။ဒီတော့..မ..တို့ ကသူငယ်ဖမ်းဖို့စီမံကိန်းချခဲ့တာပေါ့။ ဟားဟားဟုတ်တယ်..ဟုတ်တယ်..မင်းကိုဒီနေ့ရဖို့အတွက်စီမံကိန်းချခဲ့တာ..မင်းကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာကြာပြီ..မင်းကလူရှုပ်လေးနော်…စော်တွေလဲအများကြီးထားတယ်။ထားတဲ့စော်တိုင်းကိုလဲဖြုတ်တာချည်းပဲ..ကောင်း ပါတယ်လေ..ငါတို့ဆီရောက်တော့ယဉ်နေတာပေါ့၊အရိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့..ဟုတ်ဘူးလား မကေသီစကားအဆုံးမှာ သုံးယောက်သားပြိုင်တူရယ်လိုက်မိပါတယ်။နောက်တော့မသူဇာက ရဲထက်..နင်ဒီညမပြန်လို့ရလား..မနက်ဖြန်စနေ၊တနင်္ဂနွေဆိုတော့ ငါတို့(၃)ယောက်ဒီမှာအမုန်းနေလို့ရတယ် အေး..ဟုတ်သားဟ..နင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရဲထက်… မကေသီကပါမေးပါတယ်။ကျွန်တော်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ တစ်ညတစ်လေဆိုရင်တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟာ (၂)ညအိပ်လောက်ကြာမှာဆိုတော့အိမ်ကိုအကြောင်းပြဖို့ လိုတယ်။
ကျွန်တော်စကားအဆုံးမှာတော့မကေသီနဲ့ မသူဇာတို့အချင်းချင်းမျက်စပစ်ပြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ်… မကေသီကစကားစလိုက်တော့..ကျွန်တော်လဲနားစိုက်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ ငါတို့သုံးယောက်ခနနေရင်အပြင်ထွက်မယ်။သူဇာ့ကိုငါက စီးတီးမတ်မှာချပေးမယ်..စားစရာသောက်စရာတွေ (၂)ရက်စာလောက်ကြိုဝယ်ထားပေါ့..အပြင်မထွက်ရအောင်…ငါနဲ့ရဲထက်နဲ့က ရဲထက်အိမ်သွားကြမယ်။ ရဲထက် အဒေါ်ကိုပြောမယ်..ငါပိတ်ရက်မှာနေပြည်တော်က တရားသူကြီးတစ်ယောက်ကိုသွားဂါရ၀လုပ်ရမယ်။အဖော် လဲရအောင်..နောက်တော့ သူ့ကိုလဲအပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လာမယ်..ကိုယ်တော်လေးကအ၀တ်အ စားတွေထည့်ပေါ့..ဟုတ်ပြီလား..ဒီညထွက်မယ်…(၈)နာရီလို့ပြောလိုက်မယ်…အိုကေဘူးလား… အင်း..ကောင်းလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပါ..ရှေ့နေမကြီးရယ်…. မသူဇာက မကေသီကိုနောက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့(၃)ယောက်သားကော်ဖီ သောက်ကြပါတယ်။
ကော်ဖီသောက်ပြီးတော့နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ (၃)နာရီခွဲ…ရုံးဆင်းချိန်ရောက်ဖို့နီး လာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ ခုနကဆွဲထားတဲ့အချိန်နဲ့ကြားထဲမှာတော်တော်လေးနားလိုက်ရပြီဆိုတော့က ကျွန်တော် အောက်ကဖွားဖက်တော်ကလဲပြန်တောင်လာပါပြီး..ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ပုခုံးကိုညာဘက်ကမှီထားပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့မသူဇာရဲ့အထိအတွေ့ရယ်။ကျွန်တော့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မကေသီရဲ့အငွေ့အသက် ရယ်ကြောင့်ပါ။ကျွန်တော်မကေသီရဲ့ဂါဝန်ပန်းရောင်လေး အပေါ်ကနေပြီးတော့မကေသီရဲ့ပေါင်သားလေးကို ပွတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဘတ်စကတ်ဘောဘောင်းဘီဟာလဲ အောက်ခံမပါတာကြောင့် မကေသီအသားကိုစပြီးထိလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ညီတော်မောင်ဟာ ခေါင်းထောင်လာပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ ပုခုံးကိုမှီရင်းအိပ်နေတဲ့ မသူဇာက သိတော့ ဇတ်ခနဲကျွန်တော်လက်မောင်းကခွါပြီးတော့ ထထိုင်လိုက်ပါတယ်။ မကေသီက… သူဇာ……လို့ခေါ်ပြီမျက်စပစ်ပြပါတယ်။
ငါပြိုင်းနေသေးတယ်..ကေသီ..ခုနတုန်းကအရှိန်မပြယ်သေးဘူ..ညမှ..အခုထိုင်ကြည့်ရင်းအားမွေးမယ်ဟာ.. မကေသီကခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူတို့(၂)ယောက်ဟာသူတို့အထာနဲ့သူတို့အချက်ပြပြီးတာနဲ့.. လာအခန်းထဲသွားမယ်ရဲထက်… အင်း…ကျွန်တော်မကေသီကိုဖက်ပြီးတော့သူမအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။သူမကိုကုတင်ပေါ်တင်မယ်လုပ်တော့.. ဒီမှာလုပ်မလို့လား… ကျွန်တော်ကခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘေးမှာရှိတဲ့မသူဇာကလဲ.. ဟုတ်တယ်လေ..ကေသီကလဲ..ညမှ..သူ့ကိုငါတို့အခြေစိုက်စခန်းကိုပြတာပေါ့..အခုဒီမှာပဲ.. အင်း…ဟုတ်ပါပြီ… မကေသီကိုကျွန်တော်ကုတင်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။မသူဇာကတော့မမြင်ရဘူးဆိုပြီးမီးသွားဖွင့်ပါတယ်။ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့သူမဟာ မကေသီရဲ့စာကြည့်စားပွဲက ဆုံလည် ဆိုဖာပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။အင်မ တန်လှပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပျိုကြီးမမတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်ဂျာနေပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့(၂) ယောက်ကိုကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်အလွန်တောင့်တဲ့ ဆက်စ်ဆီဖြစ်လွန်းတဲ့တောင်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ရေဆေးငါး ကြီးလိုလှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ မမတစ်ယောက်ကလဲ ထိုင်ကြည့်နေတယ်။ဆိုတော့က….မိတ်ဆွေ..ကျွန်တော့စိတ် တွေဘာဖြစ်နေမယ်ထင်သလဲ…။ အား..အင့်…ကောင်းတယ်..အစိကို..အား..ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်မကေသီရဲ့ပေါင်ကိုဖြဲပြီးတော့ပေါင်ခွကြားမှာနေရာအသေအချာယူကာမကေသီစောက်ဖုတ်ကိုယက်ပေးနေပါတယ်။စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုလျှာနဲ့ပွတ်ဆွဲလိုက်..အစိလေးကိုယက်လိုက်၊ဘေးနှစ် ဘက်ကနှုတ်ခမ်သားတွေကို နှုတ်ခမ်းနဲ့စုပ်ပေးလိုက်၊အစိလေးကိုအာငွေ့လေးပေးလိုက်နဲ့ပုံစံမျိုးစုံယက်ပေးနေပါ တယ်။မကေသီရဲ့စောက်ဖုတ်ဟာအရည်တွေတော်တော်လေးရွဲလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆီးစပ်မှာရှိတဲ့အမွေးနုနုလေးတွေမှာတောင်မှ ကျွန်တော်ယက်ထားတဲ့အတွက်အရည်တွေရွဲစိုနေပါတော့တယ်။
အား..ကောင်းလိုက်တာ..ရှီး..စုပ်..အစိလေးကိုစုပ်ကွာ… မကေသီခိုင်းတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးနေမိပါတယ်။ (၅)မိနစ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်လဲဂျာရတာအသက်ရှု ကျပ်လာတာနဲ့ပဲ ပက်လက်ကလေးအိပ်နေတဲ့မကေသီရဲ့ဘေးမှာလှဲလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော့်ဖွားဖက်တော် ကြီးကတော့မိုးပေါ်တက်မဲ့ဒုံးပျံကြီးအလားကိုထောင်မတ်လျှက်ရှိပါတယ်။မကေသီလဲကုန်းထပြီးတော့ ကျွန်တော့်လီးကိုတစ်ထစ်ချင်းလျာနဲ့ယက်ပြီးတာနဲ့ တစ်ချောင်းလုံးကိုအာခေါင်ထဲထိရောက်အောင်စုပ်ပါတော့ တယ်။ဒီမမနှစ်ယောက်လုံးရဲ့လီးစုပ်ပညာဟာတစ်ယောက်ကိုတစ်မျိုးစီ ဂုဏ်ထူးမှတ်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်က အောက်ကနေမနေနိုင်တော့တာနဲ့ ကော့ကော့ပြန်တင်ပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်မကေသီကအာခေါင်ထဲ ကိုထိုးသွင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်လဲသူ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး လီးကိုမျက်နှာနဲ့စိုက်ချလိုက်ပါတယ်။(၅)စက္ကန့်လောက် ကြာအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်လီးကသူ့အာခေါင်ထဲမှာပါ။၀ူးဝူးဝါးဝါးအသံထွက်လာပြီး ကျွန်တော့ပေါင်ကိုမကေသီကလာကုပ်တော့မှ ဖိထားတဲ့လက်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။ ဝေါ့..အဟွတ်..အဟွတ်…အား.လားလာ…ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲရဲထက်ရယ်..အန်ထွက်တော့မယ်.ဒီမှာ အာခေါင်ထဲလက်ညှိုးထိုးထည့်ပြီးအန်သလိုဖြစ်နေပြီ… ကျွန်တော်လဲဘာမှမပြောတော့ပဲ..မကေသီရဲ့နို့နှစ်လုံးကိုကုန်းပြီးစို့လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့နို့တွေဟာတွဲမနေပေမဲ့တင်းတင်းရင်းရင်းတော့မရှိပါဘူး။မသူဇာလောက်နို့မကြီးပေမဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးရဲ့ဆိုဒ်လောက်တော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်နို့စို့လိုက်၊နို့သီးခေါင်းကိုလျှာနဲ့ ကကြီးခခွေးသဏ္ဍန်ရေးပေးလိုက်လုပ်နေတော့သူမလဲဖီလ်းပြန်တက် လာတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ..မကေသီပေါင်ကိုအသာဖြဲလိုက်ပြီး ကျွန်တောလီးဒစိ နဲ့ သူမအစိကိုပွတ်ပါတော့တယ်။ အား..ရှီး..အင်း..ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ်..ထည့်လိုက်ပါတော့..မလိုချင်နေပြီ… ။
အင်း.. ကျွန်တော်လဲသူမစကားကိုနားထောင်ကာလီးကိုတစ်ဆုံးထည့်လိုက်ပါတယ်။မကေသီစောက်ပက်ထဲကျွန်တော့်လီးဝင်သွားတော့ခံစားမှုတစ်ခုရပါတယ်။အဲ့ဒါကတစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။မကေသီနဲ့မသူဇာတို့(၂)ယောက်ဟာစောက်ဖုတ်တွေရဲ့အကျဉ်းအကျယ်ကအစတူညီနေသလားလို့ထင်မှတ်ရလောက်အောင်ကို မကျဥင်္်းလွန်းမကျပ် လွန်းနဲထိထိမိမိရှိပါတယ်။အသားဖြူတဲ့မသူဇာကတော့ အရည်ပိုရွမ်းတဲ့သစ်သီးလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မသူဇာက တော့ညိုစိမ်ွစိမ်နဲ့မို့ လုပ်ရတာစီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိလှပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲပက်လက်လှန်ပြီးအောက်ကနေစောက်ဖုတ် ကိုဝေ့၀ိုက်ပြီးပင့်တင်ပေးနေတဲ့မကေသီကို အားနဲ့လိုးရင်းကြာလာတော့သူမကိုဆွဲမလိုက်ပြီး ကျွန်တော်လဲခြေ ဆင်းလိုက်ကာတစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီးမျက်နှာချင်းအမ်တဲ့ ပုံစံလုပ်ကြပါတယ်။မကေသီကတေ့ လက်တစ်ဖက်ကိုအနောက်ကိုထောက်ထားပြီး ကျွန်တော်မျက်နှာကိုအံကြိတ်ကြိတ်ပြီးကြည့်ရင်းခံပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲသူမရဲကျင်တဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲပြီးတော့ကိုဆောင့်ပေးတာပါ။ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော် အနောက်ကိုပက်လက်လှန်လှဲချလိုက်ပါတယ်။မကေသီကို လှပတဲ့မြင်းစီးသမလေးလုပ်စေချင်တာပေါ့။မကေသီ လဲကျွန်တော်ပက်လက်ဖြစ်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်မှာ ကျွန်တော်ဒုတ်အပေါ်မှာဆောင်ဆောင့်ထိုင်လိုက်ပြီး လီး ကိုလဲအရင်းကနေကိုင်ကာ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကျွန်တော့်လီးဝင်သွားတာ နဲ့တစ်ပြီုင်နက်ကို သူမဟာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ မြင်းစီးသမလေးသဖွယ်အရှေ့အနောက်အေ၀့အ၀ိုက် အတွန်း အထိုးလေးတွေနဲ့ ပညာပြနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲမျက်စိမှိတ်ခံနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော့်ခေါင်းရင်းမှာတစ်စုံ တစ်ယောက်ရောက်နေတဲ့ခံစားမှုရလို့ ကြည့်လိုက်တော့ကျွှန်တော့်မျက်နှာဟာ ခပ်ကွကွလုပ်ထားတဲ့မသူဇာရဲ့ ပင်တီအနက်လေးနားကိုရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်လဲမျက်နှာနားရောက်နေတဲ့မသူဇာရဲ့အတွင်းခံအောက် စောက်ဖုတ်လေးကို ယက်ပေးနေမိပါတယ်။
မကေသီကတော့အပေါ်ကနေပညာအမျိုးစု ပြနေလေရဲ့ဗျာ။ အား..ကောင်းလိုက်တာ..ကောင်းတယ်..ဆောင့်ကွာ..နာနာလေးရဲထက်.. သူမပြောတဲ့အတိုင်းတစ်သွေမသိမ်းလိုက်နာက ကျွန်တော်လဲ အချက်ပေါင်းများစွာသောဆောင့်ချက်တွေနဲ့သူမ ကိုဖြူတ်ပါတော့တယ်။(၁၉)မိနစ်ခန့်ကြာတော့သူမလဲကျွန်တော့်အပေါ်ကနေပြီးသွားပါတယ်။ကျွန်တေ်ာလဲ လီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးသူမကိုပက်လက်ပြန်လှန်လိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမခြေထောက်နှစ် ချောင်းကိုကိုင်ပြီးတစိတီတူးပုံစံနဲ့ အားပါးတရဆောင့်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော့်ဆောင့်ချက်တွေစိတ်လာတာနဲ့ အမျှမကေသီဆီကအော်သံ၊ညည်းညူသံလေးတွေတောတော်ထွက်လာပါတယ်။မသူဇာကတော့အနီကပ်ကို လိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။ အား..ကောင်းတယ်..မရယ်..ဘယ်မှာပြီးရမလဲ.. အင်း..ဖြစ်နီုင်င်အဲ့ဒါမျက်နှာပေါ်မှာလာပန်းလို့ပြောတာပါ။။ကျွနိတော်လဲမီးကုန်ယမ်း ကုန် ဆောင်ရွက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့။
သုတ်ထွက်ချင်လာတာနဲ့မကေသီရဲ့နှဖူးကိုမှန်းပြီးခွကာပန်းလိုက်ပါတယ်။မကေသီကရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေအထိပါကျွန်တော်အဖြူရည်တွေတက်စင်ပါတော့တယ်။ကျွှန်တော်လဲ(၂)ချီ ဆွဲပြီးပြီဖြစ်လို့ပြီုင်းနေတဲ့အတွက်အိပ်ယာပေါ်မှာသွားလှဲလိုက်ပ်ါတယ်။မကေသီကတော့သူပါးစပ်မှာလရည်ပေ နေရက်နဲ့ မသူဇာကိုသွားပြီးတော့ကစ်ဆင်ဆွဲပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့(၃)ယောက်တစ် ယောက်ရေချီုးခန်းထင်ဝင်ပြီးရေချီုးလိုက်ပါတော့တယ်။ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကအလယ်က မသူဇာက ကျွန်တော့်ကျောဘက်က မကေသီကတော့ ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာပါ။ ဆပ်ပြာတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့နို့တွေကိုပွတ်လိုက်၊အဖုတ်တွေကိုလက်နဲ့အုပ်ကိုင်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်လီးကပြန်ပြီးတော့မာလာပါတော့ တယ်။မသူဇာကကျွန်တော်ကျောဘက်ကနေသိုင်းဖက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့မာနေတဲ့ လီးချောင်းကြီးအောက်က။
ကျစ်ထုတ်မာကျောနေတဲ့ဥကြီးကိုပေါင်ကြားထဲကနေပြီးတော့ ပွတ်သတ်ပေးနေပါတယ်။မကေသီကတော့ သူမရဲ့လုံးဝန်းတဲ့ နီု့အုံတွေမှာကပ်နေတဲ့ ချွန်ထွက်ဆူးမြနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်နို့ကိုပွတ်နေပါ တယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ..ကျွန်တော်ဒီအတွေ့အကြုံကိုဘယ်လိုအဓိပယ်ဖွင့်ဆိုရပါ့။ ဒီလိုမျိုးအမျိုးအမည်မဖော်ပြနိုင်တဲအရသာကို ကျွန်တော်မိန့်မူးစွားနဲ့ခံစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖွားဖက်တော် လိင်တန်ကြီးကတော့ မာကျောထောင်မတ်နေတာပေါ့။မသူဇာရော..မကေသီရောက ရေချိုးခန်းထဲမှာရေချိုးနေ တုန်းမှာ တော့လုံးဝကျွန်တော့်လိင်တန်ကိုမထိဘူးခင်ဗျ.။ ဒါဟာညစာအ၀စားဖို့အတွက်ရိက္ခာကြိုတင်စုဆောင်တဲ့ သဘောများလားတော့မသိပါဘူးဗျာ။တခနတာလောက်ကျွန်တော်တို့(၃)ယောက်သားပွတ်သတ်နေပြီးတော့ရေချိုးလိုက်ပါတယ်။ရေချိုးနေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဟာသူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖောင်ကားအိစက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီး တွေကိုလက်နဲပွတ်တိုက်ပေးနေပါတယ်။
သူတို့ကလဲတဟင်းဟင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ….. ရေချိုးပြီးတော့ အ၀တ်အစားကိုယ်စီလဲလှယ်ပြီးတော့မကေသီကားနဲ့ပဲ။မြေနီကုန်းကစီးတီးမတ်ကိုထွက်လာခဲ့ ပါတယ်။စီးတီးမတ်ရောက်တော့မသူဇာကိုချထားပေးခဲ့ပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့မကေသီတို့ဟာကျွန်တော်အိမ် ရှိတဲ့စမ်းချောင်း ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲကြိုတင်စီစဉ်ထားကြတဲ့အတိုင်းမသူဇာကိုစီးတီးမတ်မှာချပေးပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့မကေသီဟာ ကျွန်တော်အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အိမ်ကိုရောက်တော့မကေသီကပဲ အကျိုးအကြောင်းကိုကြိုတင်တိုင်ပင် ထားတဲ့အတိုင်းဖောရှောလုပ်ပါတော့တယ်။အိမ်ကလူတွေကလဲလက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော် အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ အ၀တ်အစား(၂)စုံလောက်ကိုဟန်ပြထည့်ပြီးအခန်းထဲကပြန်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ပြီး တဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကပဲမကေသီရဲ့ကားကိုမောင်းလို့။
မသူဇာရှိတဲ့စီးတီးမတ်မှာဝင်ခေါ်ပြီးတော့ မကေသီအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ မကေသီအိမ်ရောက်တော့။မသူဇာဝယ်လာတဲ့စားစရာတွေနဲ့ အခြားသောပစ္စည်းတွေကိုကူညီပြီးနေရာချထား လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မကေသီနဲ့ မသူဇာ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရယ် တီဗီရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ ကိုရီး ယားကားတစ်ကားကိုဖွင့်ကြည့်နေကြပါတော့တယ်။ ကိုရိးယားကားကလဲ အဖော်အချွတ်ကားဆိုပေမဲ့စကား ပြောခန်းတွေများနေတာကြောင့်(၃)ယောက်သားပျင်းလာကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ မသူဇာနဲ့မကေသီက၀ယ်လာတဲ့အသားပြားတွေ၊ကြက်သားလုံးတွေသွားကြော်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သူတို့(၂)ဦးအနောက်ကနေပြီး လိုအပ်တာတွေကူညီနေရင်၊စွင့်ကားလှတဲ့တင်သားပိုင်ရှင်များရဲ့ တုန်ခါခြင်းအနုပညာကို ရှုစားနေပါလေတော့သည်.. ပြီးပါပြီ။
သူတပါးကို ထိခိုက်နာကျင်မှုမျိုးထက် ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာမရှိပါဘူးး